မဆိုလူတစ်ဦးအားနည်းချက်တွေကိုရှိပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်စုံတစ်ယောက်သည်သူ၏စွပ်စွဲချက်မစုံလင်၏ကြောက်မက်ဘွယ်သောအရှက်ကွဲခြင်းကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်, တိတ်တဆိတ်သူ့ကိုရည်ညွှန်းသည်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီအခွအေနေပိုမိုဆိုးရှား, လူသားဖွံ့ဖြိုးဖြစ်ပါတယ် ရှုပ်ထွေးသော ။ စိတ်ပညာရှင်တစ်ဦးပြောင်သို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိထစ်အငေါ့တစ်ခုမျိုးအဖြစ်သူတို့ကိုအရည်အချင်းပြည့်မီ။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌, လူနာတောင်မှအလေးအနက်ကုသမှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ရှုပ်ထွေးကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ တခါတရံမှာသူတို့ကပင်မမြင်ရတဲ့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သှဖေ၏တိုးတက်မှုထဲတွင် Neurosis, obsessive-compulsive ရောဂါ, စိတ်ကျရောဂါ, ကျူးကျော်များ၏မထိန်းချုပ်အကြိမ်ကြိမ်, etc သို့ဘာသာပြန်ဆိုလိမ့်မယ် ထို့ကြောင့်, လူ့စနစ်များကိုမဆိုအမှုအတွက်အနုတ်လက္ခဏာအချက်အဖြစ်မှတ်နေကြသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားပဋိပက္ခ - ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအချို့သောအရေးကြီးသောရွေးချယ်မှုစေရန်အတင်းအကျပ်ကား, မိမိယုံကြည်ချက်ဟာစိတ်ရင်းနဲ့ပျော်ဆန့်ကျင်ကြွလာတော်မူသောအခါ,
ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကသူကိုယ်၌နှစ်သက်မှုမရှိကားအဘယ်သို့သူပြင်ပေးသို့မဟုတ်ပင်ဖျက်ချင်ပါတယ်ကွောငျ့အသုံးအများဆုံးတစ်ခုညံ့လို့ရှုပ်ထွေးစဉ်းစားသည်။ ဤသည်စသည်တို့ကိုဇာတ်ကောင်ရိုနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နှင့်လူမှုရေးအနေအထားနှင့်အတူအပေးအယူ, အခြို့ကိုမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်
တစ်သာလွန်ရှုပ်ထွေးသော - သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအထက်တွင်သွေဖီ "၏ antithesis" အဖြစ်ရှုပ်ထွေးသော၏များစွာသောအခြားမျိုးရှိပါတယ်။ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း, မာနထောင်လွှား, လက်မခံ - ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုသူအပေါငျးတို့သအရိုအသေအပေါငျးတို့သညျအခွားသူမြားထကျပါဦးခေါင်းနှင့်ပခုံးဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်သင့်လျော်စွာပြုမူသေချာအခါကငွေကြေးဖောင်းပွမှု Self-တန်ဖိုးထားမှာပြနေသည်။ တခြားအမျိုးအစား:
Oedipus ရှုပ်ထွေးပြီးတစ်ဦးဆန့်ကျင်ဘက် Electra ရှုပ်ထွေး ။
အာဇာနည်ရှုပ်ထွေးသော (သို့မဟုတ်ယဇျပူဇျော), စသည်တို့ကို
တစ်ဖွဲ့လုံးကလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏လှပသောဝက်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုပ်ထွေးသောအခြားကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်ပြသထားပါသည်, သို့သော်ဤကိစ္စတွင်အတွက်စိတ်ခံစားမှုအဆင့်ကိုမြင့်မားတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးတွေရှုပ်ထွေးသောနည်းလမ်းသူမ၏အသွင်အပြင်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုညံ့လို့ရှုပ်ထွေးထံမှခံရဖို့ပိုများပါတယ်ဟုဆိုသည်။ ထိုအငြင်းပယ်ခံရ၏ပထမဦးဆုံးအမှု၌ပါလျှင်မကြာခဏမကြာခဏလူကြီးအဖြစ်ဝယ်ယူ, ဆန့်ကျင်ပေါ်, လူငယ်၏ကာလမှဒုတိယမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ပြီး - တစ်ဦးပျက်ကွက်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးနောက်, အချစ်ဇာတ်လမ်း။
ရည်မှန်းချက် - ကောင်းမကောင်းပါသလဲ
ဦးနှောက် function ကိုတိုးတက်လာဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Snobbery - အဘယ်အရာသည်နှင့်မည်သို့ကိနျးခမျးသတ်မှတ်ဖို့?
Bulimia - အိမ်မှာကုသ
အနိုင်ကျင့် - ကကိုဖေါ်ထုတ်ခြင်းနှင့်မိသားစုအတွက်, အလုပ်မှာကျောင်းမှာ bullying နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံဖြစ်ပါသည်ဘာလဲ?
Kourtney Kardashian အသစ်တစ်ခုကိုငယ်ရွယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အတူဟိုတယ်တွင်ပြောက်ခဲ့သည်
Fitomutsil - တစ် laxative ထက်ပိုကောင်းတဲ့!
လမ်းစတိုင် Chloe Moretz
သန္ဓေသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတ - ကိုယ်ဝန် 25 အပတ်က